Echiche ofgha 6 nke mmekọrịta mmadụ na ibe | Martech Zone
Enweghị iwu! Nke a abụrụla mantra m kemgbe ahịa. Ihe m na-ekiri nke na-arụ ọrụ dị egwu maka otu ụlọ ọrụ na-ebu obere agịga ahụ maka ọzọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ abụọ enweghị otu, mana anyị nwere ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịre ahịa na ahịa nke akpọrọ ọkachamara nke na-enye ndụmọdụ nzuzu kwa ụbọchị.
O doro anya na e nwere usoro nke nwere ike ọ gaghị adaba na ụlọ ọrụ, enwere usoro nke na-arụ ọrụ nwa oge mana ọ nwere ike imebi ogologo oge, na enwerekwa usoro ndị nwere ike ịdaba gị na nsogbu. Na mgbọrọgwụ nke gị ahịa azum, ezie, kwesịrị ịbụ gị ike na-edebe azum na-na-gbapụ wee nwalee nke gị. Emela atụmatụ dị iche iche na - arụghị ọrụ maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ na onye na - enye ndụmọdụ anaghị achọ… ha nwere ike rụọ ọrụ!
Po.st gwuru site na data anyi banyere mmadu wee choputa ihe omuma di iche iche nke n’eme ka otutu ihe omuma ndi mmadu nwere ike iche na obu eziokwu.
Nke a bụ ezigbo infographic si folks na Po.st, a URL shortening and social sharing platform - 6 Echiche ofgha nke Social Sharing.